सबै लेखक गड–गिफ्टेड हुँदैनन् – Sourya Online
सबै लेखक गड–गिफ्टेड हुँदैनन्
सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १३ गते २:०४ मा प्रकाशित
गोविन्द गिरी प्रेरणाका बारेमा केही लेख्नु थियो, अमेरिका छँदैको बाचा जो थियो । करिब आठ वर्षपहिलेको कुरा हुनुपर्छ । अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डिसीमा कवि हेमन्त श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको एउटा रेस्टुरेन्ट थियो ‘माउन्ट एभरेस्ट रेस्टुरेन्ट’, त्यसमै गोविन्दको कथायात्राका पच्चीस वर्ष भनेर एउटा ससानो जमघट भएको थियो । कार्यक्रमपछि पनि हामी दुईजना रेडवाइनका मिहिन गिलास समातेर धेरै बेरसम्मै बसेका थियौँ । मैले त्यहीबेला पनि कतै लेखेको थिएँ– नेपाली कथाकारको नाममा एक अमेरिकी साँझ । अहिले कवि हेमन्तको त्यो रेस्टुरेन्ट बन्द भइसक्यो, मैले लेखेको त्यो लेखोट पनि कतै मिसप्लेस भयो । बस्, केवल प्रेरणा र म मात्र मिसप्लेस भएका छैनौँ ।
जहिले पनि अप–टु–डेट भएर हिँड्न रुचाउने उनै गोविन्दजीसँग पछिल्लोपटक यही भदौमा काठमाडौंमा भेट भएको थियो ।
जन्मथलो मकवानपुरको टेक्कर सिस्नेरी छाडेर प्रेरणाले काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाए । पछि काठमाडौं पनि छाडेर उनी अमेरिका प्रवासिए । तर, जहाँ रहे पनि अक्षरसित बसेको उनको प्रेम कहिल्यै कम भएन, सायद हुन दिएनन् उनले । गीत, कविता, कथा, निबन्ध, उपन्यास, यात्रासंस्मरण, हास्यव्यङ्ग्य, समालोचना, अनुवाद, कृति सम्पादन आदिमा उनले कलम चलाउँदै आए । र पनि, न आफू थाकेका छन् न कलमको टुँडो थामिन दिएका छन् । जतिबेला ०३४ सालमा उनको पहिलो कथा छापिएको थियो ‘किनारा’ शीर्षकमा, उनी भर्खर १९ वर्षका हरहराउँदा तन्नेरी थिए । त्यसको छ वर्षपछि त साझा प्रकाशनले उनको पहिलो कथासंग्रह नै प्रकाशित गर्‍यो– ‘सुतेको समुद्र’ । अनि त नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रत्न पुस्तक भण्डार आदि प्रतिष्ठित संस्थाहरूले एकपछि अर्को गर्दै उनका कृतिहरू निकाल्दै रहे । विभिन्न विधामा गरी बितेका तीन दशकमा प्रेरणाले तीसकै हाराहारी कृति आफ्नो नाममा बजारमा ल्याइसकेका छन् ।
यी तीन दशकको मूल्यांकन गर्दा उनलाई के लाग्छ ? ‘म साहित्यको केन्द्रबिन्दुमै छु जस्तो लाग्छ । यसको कारण पनि स्पष्ट छ– ०३४ ताका लेख्न सुरु गरेका कतिजना कथाकार अहिलेसम्म पनि सक्रिय छन् र ? उनीहरूको निरन्तरता खोइ र ?’ उनी चुनौतीको भाकामा जवाफ फर्काउँछन् । सायद यही कारण हो, उनी आफूलाई समकालीन पुस्तामा नम्बर वानकै क्याटागोरीमा रहेको मान्छन् । एक प्रसंगमा उनले भने– ०३६ मा सडक कविता क्रान्तिमा डेढ सयजना सहभागी थिए तर त्यसमा पाँचजना पनि मैले जतिको लेखिरहेका छैनन् ।
उनलाई सतही देख्ने र राम्रो साहित्यकार नमान्नेहरू प्रशस्तै छन् । उनमा गुणवत्ता नदेख्ने मनग्गे छन् । उनीविरुद्ध आरोप छ– उनी केवल संख्याका पछि मात्र दगुर्छन्, उनी यति दर्जन पुस्तक लेखेँ भन्न रुचाउने प्रवृत्ति भएका सर्जक हुन् । तर, यसमा उनी सहमत छैनन्, ‘कस्तो लेखनलाई गम्भीर र कस्तोलाई सतही मान्ने भन्ने आफँैमा एउटा प्रश्न हो । मेरो आख्यानमा जीवन्तता छ, मान्छेको भोगाइ छ । त्यहाँ मनगढन्तता छैन । कल्पना छैन । मैले सस्तो वा बजारु साहित्य लेखेको छैन । यसरी म जीवनभन्दा टाढा नगएको हुँदा मेरो लेखन सतहीपनभन्दा धेरै माथि छ । त्यसो त गम्भीर पाठकलाई चिन्न सकिँदैन, उसलाई भेटिँदैन पनि ।’
‘पञ्चायतकालमा कुनै मन्त्रीले साहित्य अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्दा त्यसको डटेर विरोध गर्नेमा म पनि एकजना थिएँ । तर सायद ती मन्त्री ठीक रहेछन् । किनभने एक बोट सुन्तला, एउटा घोघा मकै वा एक बोट खुर्सानी उमारेर खेती हुँदैन । एउटा लेखे महान, चारवटा लेख खत्तम भन्ने हुँदैन । मलाई लाग्छ, धेरैभन्दाधेरै लेख्नुपर्छ । यो त जति रन्दा चलायो काठ त्यति नै मुलायम हुँदै गएजस्तो हो । सबै लेख गड–गिफ्टेड हुँदैनन् । मैले धेरै लेखेँ भनेर मलाई तल पार्न केही व्यक्ति र कथित समालोचकले चलाएको हल्ला मात्र हो,’ यसो भनिरहँदा उनमा आत्मविश्वास झल्किन्छ ।
आफ्ना पाठकप्रति निकै सन्तुष्ट देखिने गोविन्द आफूलाई ‘म्यान अफ लेटर्स’ मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘म साहित्यकार हूँ, विधा दोस्रो कुरा हो । एउटा अंश हो । म कवि पनि हूँ, गद्यलेखक पनि हूँ– कविताबाट टाढा हुन सक्दिन, आख्यान छोड्न पनि सक्दिन । पद्य र गद्य अन्तरघुलित भएर रहेका छन् मभित्र ।’ उनका लागि कविता भनेको स्पार्कल हो, एक किसिमको झिल्का वा चटयाङ परेको जस्तो । भोगेको वा अनुभव गरेका कुराहरू नै उनी लेख्छन् । अनौठो मान्न सकिने कुरा के छ भने उनलाई लेख्नका लागि खास वातावरण वा परिवेश केही चाहिँदैन । ‘अन्तिम खाडल’ उपन्यास उनले जर्मनी बसाइमा केवल १३ दिनमै लेखिसिध्याएका थिए रे । भन्छन्– मनमा परिपाक भएको कुरा पस्कने मात्र हो ।
पछिल्लोपटक भदौमा काठामाडौं आएका बेला गोविन्दले दुईवटा पुस्तक सार्वजनिक गरे– सत्रवटा कथाको संग्रह ‘छड्के तिलहरी’ र १०८ प्रश्न समेटिएको साइबर अन्तर्वार्ता ‘कमल दीक्षितसँग इमेल वार्ता’ । वर्तमान नेपाली कथालेखनको प्रवृत्ति कस्तो छ त ? ‘खासमा यसमा कुनै अभूतपूर्व फड्को देखा पर्न सकेको छैन, उही सधैँ चलिरहने परम्परा र प्रयोगको मिश्रण मात्र छ । बरु पाठकहरू कथा वा अन्य विधाभन्दा उपन्यासतिर बढी आकर्षित भएका हुन् कि जस्तो लागिरहेको छ,’ उनको ठम्याइ छ ।
अचेल नेपाली साहित्यमा निकै चलेको शब्द हो– डायस्पोरिक । प्रेरणा यसलाई आप्रवासी लेखन भनेर सहजता दिन्छन्, ‘प्रवासी मुलुकको भोगाइलेखन नै डायस्पोरिक लेखन हो । साहित्य उदात्त, उदार र विस्तारित हुन्छ, यसलाई साँघुरो पार्नु हुँदैन । आफ्नो देशबाट टाढा हुनुपरेको पीडा र नयाँ देशमा सम्झौता गरी बाँच्नु पर्ने अवस्थाको पीडा नै आप्रवासी लेखनको भावभूमि हो । प्रवासिएको मानिस एक दिन नेपाल फर्कन्छु भनेर बस्छ तर ऊ कहिल्यै फर्कंदैन । तसर्थ नेपालको नोस्टाल्जियाबाट मुक्त भएर प्रवासी मुलुककै बारेमा लेख्न समय लाग्छ ।’
अचेल उनी आत्मकथा लेखिरहेका छन् । त्यसलाई खण्डखण्डमा प्रकाशित गर्ने उनको सोच रहेछ । थकाली भान्छाको टेबलबाट उठ्नुअघि एउटा प्रश्नको झटारो हानेँ, तपाईं किन लेख्नुहुन्छ ? प्रेरणा एक निमेष तनावग्रस्त जस्ता देखिए, र भन्न थाले, ‘यो प्रश्न त मेरा लागि तपाईं किन सास फेर्नुहुन्छ ? तपाईं किन खानुहुन्छ ? किन बाँच्नुहुन्छ ? भने झैँ हो । यो त मेरो जीवनको अकाट्य र अविभाज्य अंग जस्तै हो । म अन्धविश्वासी होइन तर मलाई ‘भावीले नै यसले लेखोस्’ भनेर पठाएको हो र त्यसकारण म साहित्यकार हुनकै लागि जन्मेको हुँ जस्तो लाग्छ ।’
बिट मारौँ, उनकै एउटा कविता, अप्रकाशित कवितासंग्रहबाट
‘नआउने रेलको प्रतीक्षामा
के जीवनको प्रतीक्षालय हो ?’